सामाजिक संजालमा कलाकारको सक्रियता कस्तो ? – An Online Entertainment News Portal
HomeNewsFeature Newsसामाजिक संजालमा कलाकारको सक्रियता कस्तो ?
November 18, 2018 sutraentertainment Feature News, Gossip, Kollywood, News 0
अहिले सामाजिक संजाल सूचनाको लागि राम्रो साधन पनि बनेको छ । सामाजिक संजालमा मानिसहरु चाडो भन्दा चाडो अपडेट भैरहेका छन् । सामाजिक संजाल आफ्नो मनमा लागेको कुरा व्यक्त गर्ने स्थान मात्र होइन, अरुको बारेमा सूचना थाहा पाउने माध्यम पनि बनेको छ ।
सामाजिक संजालको प्रयोगमा नेपाली फिल्मका कलाकार पनि अघि नै छन् । नेपालका अधिकांश कलाकारले फेसबुक, इन्स्टाग्राम प्रयोग गरेका छन् । ट्विटरमा नेपाली फिल्मका कलाकारको सक्रियता खासै छैन ।
फेसबुक र इन्स्टाग्राममा पोष्ट हुने कलाकारका सामाग्री कस्ता छन् त ? आउनुहोस् यसको बारेमा कुरा गरौ ।
सामाजिक संजालमा सवैभन्दा सक्रिय अभिनेत्री हुन् प्रियंका कार्की । प्रियंका कार्कीको फेसबुक र इन्स्टामा फलोअर्स पनि राम्रा छन् । तर, प्रियंकाले सामाजिक संजालमा प्राय आफ्ना तस्बिर मात्र पोष्ट गरेको पाइन्छ । फेसबुकमा सफ्ट हुने प्रियंका इन्स्टामा हट हुन्छिन् । उनले राखेका धेरै तस्बिरले चर्को आलोचना पनि भोग्छ । देश, समाज, नेपाली फिल्मको अवस्थाको बारेमा उनी बोलेको देखिदैन । कहिलेकाही कस्तो तस्बिर राख्ने भन्ने बिषयमा उनले भेउ नपाउँदा आलोचना भएको देखिन्छ ।
अभिनेत्री रेखा थापा भने फेसबुक र ट्विटरमा बढी सक्रिय भएको पाइन्छ । उनले, समाज र देशको बारेमा र समसामयिक राजनीतिक कुरामा बढी नै ध्यान दिने गरेको पाइन्छ । अभिनेत्री केकी अधिकारीको सक्रियता पनि उस्तै छ । उनले पनि बेला बेलामा समाज र घटनाको बारेमा बोल्ने र लेख्ने गरेकी छिन् । नत्र उनी पनि आफ्नै फोटोमा रमाएको पाइन्छ ।
अभिनेता अनमोल केसी पनि फेसबुक र इन्स्टामा बढी सक्रिय छन् । उनले त देश, समाजको घटनाको बारेमा केही पनि बोलेको पाइदैन । बरु, उनी आफ्ना स्टाइलिस्ट तस्बिरमा नै बढी रमाएका छन् ।
सामाजिक संजालमा अधिकांश कलाकार सक्रिय छन् । नेपाली कलाकारले ट्विटर कम फेसबुक र इन्स्टा बढी चलाएको पाइन्छ । विदेशी सेलिव्रेटीले भने इन्स्टा र ट्विटरलाई लोकप्रियताको माध्यम बनाएका छन् ।
कलाकारले सामाजिक संजालमा व्यक्त गर्ने कुरा, राख्ने तस्बिर मिडियाका लागि पनि रुचिकर हुन्छ । तर, नेपाली कलाकारले मिडियालाई ध्यानमा राखेर तस्बिर र आफ्ना कुरा व्यक्त गर्दैनन् । यसैले, सामाजिक संजालमा उनीहरुलाई पछ्याउनेको संख्या राम्रै भएपनि उनीहरुका तस्बिर र कुराले सामाजिक संजाल बाहेक बाहिर खासै बहस सिर्जना गर्न सक्दैन ।
सामाजिक संजाल आफ्नो सिनेमा र आफ्नो तस्बिर प्रचार गर्ने माध्यम मात्र होइन । यसलाई कलाकारले धेरै अर्थमा प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ । जुन कुरामा नेपालका कलाकारमा ठूलो अभाव देखिएको छ ।
यसैले, सामाजिक संजालमा खाएको, घुमेको, रमाएको, छोटा लामा पहिरन लगाएको तस्बिर मात्र राखेर रमाउने काम नगरौ । यी बाहेक अन्य थुप्रै कुराका लागि कलाकारले सामाजिक संजाल प्रयोग गर्न जान्नुपर्दछ । यतातर्फ पनि कलाकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
‘झरना झरी’मा निराजन र निरंजलीको रोमान्स